Ihe osise mbụ nke Sony Xperia XZ3 ka edozichara | Gam akporosis
Ihe osise mbụ nke Sony Xperia XZ3 ka edozichara
Nyaahụ ihe oyiyi e leaked ekwu na ọ bụ Foto izizi nke Sony Xperia XZ3. N'oge a anyị amaghị ihe anyị ga-ekwere, ngwaọrụ a abanyela ọtụtụ oge na enwere ọtụtụ ozi dị iche iche, mana ọ bụrụ eziokwu, nke a ga-abụ ihe anyị ga-ahụ na IFA 2018, ihe omume ga - eme izu na-eso na Berlin.
Ekwentị ọ dị ka enweghị ọkwa na Sony na-aga n'ihu na-eji akụkụ nke ọdịnala ọdịnala ya na nnukwu bezels dị elu na ala iji gbakwunye ndị ọkà okwu abụọ dị elu, otu n'okpuru logo na otu n'okpuru igodo nsoroụzọ.
A asịrị na pụtara izu ole na ole gara aga na-egosi na ngwaọrụ ga-enwe a FHD + ihuenyo na-enweghị ọkwa, N'aka nke ọzọ, a na-ekwu okwu banyere ekwentị nwere ihuenyo achọọ, ọ bụ ezie na oyiyi ahụ anyị anaghị ahụ na nke a bụ eziokwu. Kedu ihe dabara na asịrị ndị gara aga bụ iji otu igwefoto nke ahụ ga-ebu ọkwa a mara ọkwa na nso nso a IMX586, ihe mmetụta 48MP.
Na onyonyo a, anyị na - ahụkwa onye na - agụ akara mkpịsị aka nke dị n'akụkụ etiti nke azụ nke ngwaọrụ ahụ, ebe a ga - ahụ ihe mmetụta ọzọ n'etiti igwefoto na ọkụ ahụ, nke nwere ike inyefe ngwakọ ngwakọ.
N'akụkụ anyị nwere ike ịhụ bọtịnụ raara nye igwefoto, yabụ echiche nke nnukwu oghere 48MP na-aga n'ihu n'ihu.
Ikpeazụ mara nkọwa na-ekwu okwu nke a processor Qualcomm Snapdragon 845 jikọtara ya na 6 GB nke RAM na nsụgharị abụọ na 64 na 128 GB nke nchekwa dị n'ime.
E nwekwara okwu batrị 3240 mAh na gam akporo 8.1 nke a ga-emelite n'oge na-adịghị anya na gam akporo P. N'ezie, mgbe ọtụtụ asịrị gasịrị, ọ nweghị nke a nwere ike ikwenye na ọ gaghị abụ ruo IFA 2018 mgbe anyị maara eziokwu niile.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Ihe osise mbụ nke Sony Xperia XZ3 ka edozichara